संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गतिविधि - Harekpal
कोभिड–१९ः बहुआयामिक गरिबीका लागि राहत, सहायता वितरणमा स्थानीय तहको भूमिका
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गतिविधि
रामचन्द्र घिमिरे १७ माघ २०७६, शुक्रबार १२:२२ मा प्रकाशित
शनिवार/नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको निवासमासंसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गतिविधिबारेमा छलफल भएको छ । कार्यक्रममा नेता आचार्यले गएको माघ ५ गते नेपली कांग्रेसले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संसदमा नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दा गर्दै बहुमतको आडमा पास गर्दै अघि बढाएको अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयकमा विरोध भएको छ ।
यतिखेर प्रतिनिधिसभामा सभामुखको चयन हुन नसकेर १ महिना भन्दा बढी बैठक बोलाउदै रोकिदै गरिएको छ । यसको विरोध धेरै बाहिर नै भएको छ । यसै विच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसले हार्ने अवस्था देख्दा देख्दै पनि सबै प्रदेशमा चुनाव लड्यो अझ प्रदेश २ मा गठबन्धन बनाएर पनि चुनाव लड्यो । तर सभामुखको निर्वाचनमा तटस्थ बस्यो ? नेकपाले जसलाई उम्मेदवार बनाएको छ उनलाई सर्वोच्च अदालतमा हत्याको अभियोगमा मुद्दा चल्दै छ । कांग्रेस उपसभामुखको लोभमा फस्यो यो अनुचित र अराजनीतिक काम भयो भन्ने भनाई पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको छ ।
संसदबाट पास भएर पनि विवादमा रहेका विधेयकहरु विज्ञापन विधेयक, व्यक्तिगत गोपनीयता विधेयक, विशेष सेवा विधेयक, फौजदारी संहीता लगायत छन् । संसदमा रहेका साथै आउने तयारीमा रहेका विधेयकहरु मिडिया काउन्सील, सूचना प्रविधि, आमसंचार, सार्वजनिक सेवा प्रशारण लगायत छन् । यस्तै विधेकहरुमा विरोध पत्र दिएर मात्र पुग्छकी ! अरु पनि केही काम गर्नुपर्छ ? किनभने प्रतिपक्षी दलले विरोध पत्र दिनु एउटा प्रक्रिया हो । संसदमा नै विरोध गर्नु आधारभूत र सही प्रक्रिया हुन्छ ।
राजनीतिक रुपमा विरोध पत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टी संसद भित्र जान पाउदैन, उसले गर्ने यही नै सही हो । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले गर्ने संसदमा विरोध अर्थपूर्ण गर्नुपर्छ । संख्या नपुगेर कहिले काही विरोध गर्दागर्दै पनि पास हुन सक्छ तर पनि विरोध गर्नैपर्दछ । यतिखेर भारतमा पनि संसद्बाट दुईतिहाईबाट २ विधेयक पास भयो । तर पनि विरोध अहिलेसम्म भइराखेको छ । यि विरोधमा पार्टीहरु धेरै मुखरीत भएर आएका छैनन् । जनस्तरमा विरोधलाई पार्टीले साथ दिदैछन् ।
यस स्थितिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले के गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा गम्भीर रुपमा विचार गर्नुपर्ने भयो । सांसद गगन थपा र रामबहादुर विष्ट समेत उपस्थित भएको समयमा गर्नुपर्ने काम नै हामीले गरेका छौं । हामीले संसद भित्रकै कुरा छलफल गर्नुपर्ने थियो । यसलाई यतिमै सीमित राख्नु हुँदैन हामीले जहाँजहाँ सकिन्छ त्यहाँ त्यहाँ यि विषय उठाउदै जानु पर्दछ ।
गगन थापा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यएवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापालेकरिव करिव एउटाकुरा स्थापित भएको देखिन्छ प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारले के गरेको छ भनेर अलग्ग रहेर प्रतिपक्षको भूमिका मात्रै कांग्रेसले निभाउन सक्यो कि सकेन भनेर हेर्यो भने अलमलमा परेको देखिन्छ । २०४६ सालपछि कांग्रेस सत्तासँग जोडिएको छ । हामी समाजसँग जोडिन सकेको छैन । कांग्रेसको समग्र संरचना नै सत्तासँग जोडिएको अवस्थामा छ ।
२०६२ सालपछि सहमति राजनीतिको नाममा प्रतिपक्षी राजनीतिको भूमिकानै रहेन । यसपटक हामीले निर्वाचन हारिसकेपछि यहाँसम्मको यात्रा सकियो अब हाम्रो प्रतीपक्ष भूमिकाको नयाँ राजनीतिक चरण सुरुभयो यसको पहिलो कुरा भनेकै लसपसबाट अलग्गै हुने हो । यसले लसपसलाई ठाउँ दिदैन त्यो अवाञ्छनीय मान्छ भनेर भन्न र गर्न सकेनौं ।
यतिखेर कांग्रेसलाई संकट र अवसर दुबै छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म ३८ प्रतिशत भन्दा बढी भोट नाघेको छैन । अब कांग्रेसले ठूलो पार्टी हुन ४०-४५ प्रतिशत भोट पाउनु पर्छ । ५÷७ प्रतिशत भोट बढाउन आजसम्म कांग्रेसललाई मतदान नगरेको ३०-३५ लाख नयाँ मतदाता आउदैछन् त्यो मान्छेलाई कांग्रेस बनाउने मौका आएको छ ।
हामीले पनि विधेयक बनाउदा नजानेर गल्ती भएको होला भन्ने मानेर हामी अघि बढ्नु पर्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमा हामी अन्य भन्दा फरक ढंगले उभिन्छौं । लोकतन्त्रको मूल्य यो हो भनेर कांग्रेस पार्टी अघि बढ्ने हो भने यसले अहिले हामीलाई अवसर ल्याएको छ ।कम्युनिष्ट पार्टी सास्कृतिक अधिकार संकुजन बनाउन गुठी विधेयकमा आयो । हामीले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारमा पनि कम्युनिष्ट भन्दा हामी फरक छौं भनेर भन्न पाइने र पर्ने अवस्थामा हामी छांैं । यो हामीलाई अवसर हो । यतिखेर कांग्रेसलाई चिनाउने बेला आएको छ ।
यो विषय उठाउन मुख्य नेता हुनुपर्दछ । यतिखेर पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । पार्टी सभापतिले प्रतिपक्ष भूमिकामा कांग्रेसलाई लैजाने मेरो काम हो । लोकतन्त्रका लागि यो कुरामा लान्छु भन्नु भयो भने सबै कुरा मिल्छ । यो अवसर हो भन्ने उहाँले ठानीराख्नु भएको छैन । यसको प्रारम्भ लसपसबाट भएको छ । हामीले सभामुखमा उम्मेदवार उठाऔं भन्यौं । तर हाम्रो नेतृत्व यसका लागि तयार भएन ।
अहिले आएका विवादास्पद विधेयकहरु एकठाउबाट छलेर अर्को ठाउँबाट आइरहेको छ । हामीले बोलि राखेका छौं, बिरोध गरिराखेका छौं, यसमा हाम्रो कुनै किसिमको सहमति छैन । हामी प्रतिपक्षीय राजनीतिमा भएको हुदा केन्द्रीय कार्यसमिकतिमा पनि हामीले पाएको फोरममा यि कुरा राख्दै अघि बढिरहनु पर्छ । अर्को संसदीय दलमा पनि यो कुरा राखिरहनु पर्छ । प्रधानमन्त्री महिनाको एउटा शुक्रबार संसदमा आएर हाम्रो जवाफ दिनु पर्छ प्रधानमन्त्री नआउनु भएको धेरै लामो समय भयो ।
रामबहादुर विष्ट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य रामबहादुर विष्टले गम्भीर विषय उठेको छ । यतिखेर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ बलियो भूमिकामा छैन, कमजोर भूमिकामा छ । यतिखेर दैनिक पत्रपधिकाहरुमा आइराखेको छ कांग्रेसको विचार भएन । कांग्रेस २ पटक चुक्यो भनेर व्यापक आलोचना गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पास भयो । यतिखेर सभामुखमा उम्मेदवार दिनुपर्छ भन्ने सबैको सोच थियो । नेकपाको उम्मेदवारलाई सर्वोच्च अदालतमा अपराधको आरोप लागि राखेको छ । यसको विरुद्धमा उम्मेदवार दिनु पर्छ भन्ने नै थियो । अन्त्यमा उम्मेदवार दिइएन यतिखेर जनमानसमा कांग्रेसको गम्भीर भूलका रुपमा लिएको कुरा दैनिक पढिरहिएको छ ।
सरकारले सबैलाई अप्ठेरो पार्ने किसिमबाट विधेयक ल्याएका छन् । सरकारले पास गर्दै अगाडि बढाएको छ हामीले विरोध गरेका छौं तर रोक्न सकेका छैनौं । अहिले चर्चामा सूचना तथा प्रविधि विधेक छ । हामीले यसमा संशोधन हालेका छौं । हामीले फरक मत लेखेका छौं । हरेक विशेषमा असहमति पत्रसहित उपसमितिबाट समितिमा आईपुगेको छ । त्यसमा पनि बहुमतबाट पास गरेर उनीहरु अघि बढे हामीलेधारा ८३, ८४, ९१ देखि ९४ सम्म ११५को अदालत गठन गर्ने त्रुटिपूर्ण छ खारेज हुनुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं ।
हामीले बोल्दा भनिराखेका छौं हाम्रो विरोध हुँदा हुँदै, फरक धारणा राख्दा राख्दै यसरी पास गरेर अघि बढ्ने हो भने हामी सडकमा जानुको विकल्प छैन भनिराखेका छौं । संसदको परिस्थिति हेर्दा हाम्रो संख्या कम भएको र संसदको पेल्ने नीतिले गर्दा हामी जनताको पक्षमा सडकमा जाने बाध्य हुँदैछौं ।
रमेश विष्ट पत्रकार महासंघका महासचिव रमेशे विष्टलेमिडिया काउन्सील विधेयक आउने बेलासम्म कांग्रेसले लिएको अग्रसरता सकारात्मक थियो । यसमा संसदीय दल र पार्टीले पर्याप्त चासो लिएको थियो । अहिले सूचना प्रविधि विधेयकसम्म आइपुग्दा यो विधेयक कस्तो छ भन्ने नेताहरुलाई नै पनि थाहा नभएको होकी जस्तो देखिदैछ । यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास भएर कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने हो भने विद्रोह हुने किसिमबाट जनमत निर्माण हुने अवस्थाको छ । यो नागरिकको विचार, अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग गासिएको विषय छ । यो भएकोले कांग्रेसले यसलाई जनसमक्ष पु¥याउन सक्दा कांग्रेसको अवस्था अबस्य बलियो हुनेथियो । त्यो गरेको फिटिक्कै पाइएन ।
अहिले पेशागत संगठनहरुमा पनि एकमत छैन । सूचना प्रविधि विधेयकमा बार एशोसिएसनसँग धेरै पटक कुरा गर्नुपरेको थियो । अरु पेशागत संगठनहरु पनि यसमा आएका छैनन् । एनजीओलाई पुरै समाप्त पार्ने सरकारको योजना भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा उनीहरुको उपस्थिति राम्रै हुने पनि गरेको छ । संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बनाएको छ । सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका अहिले जतिपनि विधेयक आएका छन् ति सबै संविधान र शासन पद्धति माथि हमला हुने किसिमले आएका छन् । ५ वर्षको जेल सजाय १५ लाख जरिवाना सरकारले बनाउने संयन्त्रले गर्ने भनिएको छ । यसले अदालतलाई ठूलो धक्का दिएको छ । यो सामाजिक संजाल लक्षीत छैन यो विचार प्रवाह गर्ने लक्षित छ । यसले समाजमा स्थापित व्यक्तित्वहरुलाई आक्रमण गर्छ । यसको नियतमा नै खोट छ । सरकार गलत नियतबाट आएको छ ।
आएका विधेयकमा पर्याप्त छलफलमा लाग्नु पर्छ । यसलाई पार्टीले संसद् र सडकमा राम्रोसँग उठाई दियो भने जनताले बुझ्ने र कांग्रेसको राजनीति सहिबाटोमा हिड्थ्यो । अहिले लगभग लगभग प्रतिपक्षी विहिन जस्तो अवस्था छ ।
तारानाथ दाहाल वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले यस्तो छलफलमा बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रतिपक्षको भूमिका संघीय तहमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा, सातै प्रदेश तहको अवस्था भयावह छ । प्रदेश तहको राजधानीमा कुनै नेताहरु बस्नु हुन्न प्रदेश तहको सरकारलाई निगरानी गर्ने, प्रश्न उठाउने यसमा कांग्रेसको कुनै भूमिका देखिदैन । प्रदेश तहमा हुनुभएको सांसदको अवस्था झन् भयावह छ । संघमा संसदीय दलको बैठक भइराखेको देखिन्छ । कांग्रेस ६ प्रदेशमा मुख्य प्रतिपक्षी दल छ । कांग्रेस भित्र सौहार्दता, मित्रवत व्यवहार, छलफल, सक्रियता केही पनि देखिदैन । प्रदेश तहमा सार्वजनिक लेखा समिति कांग्रेसले पाएको देखिन्छ तर त्यो सभापति एक्लै छन् । त्यसैले प्रदेशको संसदीय दलको अवस्था, पार्टीको संरचना र नेतृत्वको अवस्था डरलाग्दो छ ।
नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक तानातान जनतालाई चासो छैन । यसले कांग्रेसको इमेज घटाएको छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र र जनतालाई लाभ दिएको महसुस गरेको अवस्था छैन । संसदमा कांग्रेस छ, अहिले कुनै एउटा विधेयकको कुरा गर्ने अवस्था छैन फौजदारी संहीतामा हामीले गम्भीर किसिमले त्रुटिहरु उठायौं, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल पनि भयो, गोपनीयताको हकको कुरा उठ्यो अहिले कुन विधेयकमा कहाँ के लेखेको छ भन्ने अध्ययन पनि भएको जस्तो देखिदैन । संसदीय दललले कतिवटा विधेयक आए, कतिवटा आउदैछन् ति विधेयकहरुको एक अर्कोसँग सम्बन्ध कस्तो छ ? अध्ययन केही गरिएको छैन । गुठी विधेयकको गम्भीर कुरा भूमी ऐनबाट आइसक्यो । हामीले हेर्दा फौजदारीमा नअटेको गोपनीयतामा, गोपनीयतामा नअटेको स्थानीय प्रशासन कानुनमा, एउटामा नभएको तानेर अर्कोमा राखिएको अवस्था छ । नेकपाको डिजाईन अनुसार यो वा त्यो बाट आइराखेका छन् । यो कुराको गम्भीर विश्लेषण कांग्रेसले गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले सेन्ट्रल रोल खेल्नु प¥यो ।
कुलचन्द्र वाग्ले बरिष्ठ पत्रकार कुलचन्द्र वाग्लेले म एउटा काटुनको चर्चा गन चाहन्छु त्यसमा ३ वाद भनेको छ । केपीको फोटो राखेर माक्र्सवाद भनेको छ । प्रचण्डको फोटो राखेर लेनिनवाद भनेको छ । र शेरबहादुरको फोटो राखेर वर्वाद भनेको छ । यो भन्दा बढी कांग्रेसको बारेमा भन्ने अवस्था नै रहेन । संसदमा विधेयको बारेमा, अधिनायक प्रवृत्तिको बारेमा पनि धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । अहिले पुरै विधेयकहरु नियोजित रुपमा सरकारले ल्याएको छ । प्रतिपक्ष छैन भन्ने कुरामा अहिले सडकमा ठट्टा हुने गरेको छ । आफ्नो कुरा राम्रोसँग कांग्रेसले भन्न सक्नु पर्छ । यतिखेर जनताको नजर काग्रेस कसरी पुर्नजागृत हुन्छ भन्ने मात्र छ ।
कांग्रेसले समयमा नै जनताको चाहना अनुसार आफुलाई हिडाउन तयार हुनुपर्छ । यसमा पनि अलमल र ढिला भयो भने अबसान मात्र हात पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । लोकतन्त्र, संसदीय शासन व्यवस्था कांग्रेसको सिद्धान्त आदर्श हो । यसलाई आत्मसाथ गरेर कांग्रेस अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसैका माध्यमले कांग्रेसले संसदमा आफ्नो गहकीलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
जगत नेपाल बरिष्ठ पत्रकार जगत नेपाललेअहिले डेमोक्रेटिक फ्रेम प्यारलाईज भएको जस्तो देखिन्छ । सत्ता पक्ष छ, प्रतिपक्ष छैन । संवैधानिक अंङ्गहरु नभएको बराबर छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त सरकार र संसद एउटै जस्तो देखिएको छ, न्यायालय उसै भित्र रहेको जस्तो देखिएको छ । सरकारको गलत निर्णयमा अदालत उभिन सक्छ कि सक्दैन भनेजस्तो देखिएको छ । नागरिक समाज प्यारलाईज छ कहि छैनन् । मिडियामा सही चिज आउन सकेको छैन । अहिले हेर्दा अधिनायकवाद आइरहेको देखिन्छ । डेमोक्रेटिक कल्चर लिनेहरु आफै अटोक्रेटीकरिजुम तिर गइरहेका छन् । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको कुरा गरेकाहरु ठूलो महाराजा जस्तो जनताले देखिराखेका छन् । अहिले बसमा यात्रा गर्दा तिनले गालि गर्ने राजनीतिक कर्मीलाई छ । जनताको आक्रोश धेरै माथि छ, कुनै नेताहरुले यसको बोध गरेको जस्तो लाग्दैन ।
कांग्रेस कहाँ अलमलिएको छभने उसलाई कुन ठाउँमा जाने भन्ने पनि छैन । कसले नेतृत्व गर्ने र कुन इसु लिने भन्ने पनि छैन । कांग्रेसको रुमलिरहेको पोजिसनमा छ । कांग्रेस डराएको अवस्थामा छ त्यो भनेको प्रतिगमनको व्यागग्राउण्ड हामीले नै बनाइरहेका छौं । यसलाई छिटो चिर्न आवश्यक छ । विधेयक भन्दा पनि उनीहरुको इन्टेन्सन खराव छ । सरकारले ल्याएको सबै सही, अरुले भनेको गलत भनिरहेका छन् यो कुरालाई उनीहरुले स्थापित गरेका छन् । पार्टी आफैले लिएको एजेण्डामा छैन ।
डेमोक्रेशी कमजोर हुने भनेको केही वर्गको हातमा यो पुगेपछि हुने हो कांग्रेसको पनि त्यहि हालत भयो भन्ने लाग्छ । मिडियामा आएन भन्ने धेरै सुनिन्छ, आजभोली डिवेट नै भएको कतै देखिदैन, त्यसैले मिडियामा आउने कुरै भएन । नयाँ विषय उठाउन सके मिडियामा ठाउँ पाइने हो । अहिले कांग्रेस कुनै एजेण्डामा बोलेकै छैन । वीपीको पालामा भरत शंशेरले प्रधानमन्त्री वीपीलाई संसदमा सोझै प्रश्न सोध्थे, लिपुलेककोबारेमा त्यो बेला प्रश्न गरिएको छ । यो चिजनै अहिले आउदैन । त्यससमयमा भरत संशेरले लिपुलेकमा चाइनीजहरुले कर उठाई रहेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए । केही समय अघि यस्तो काम नरहरि दाइको टिमले गथ्र्यो । नरहरि दाइ, चक्र दाइहरुले हामीलाई कहिले काही बोलाउनु हुन्थ्यो हामी आउथ्यौं । अहिले यो काम कांग्रेसमा जिरो छ । यो सबै अंङ्ग नबनेसम्म कांग्रेसको घर बन्न कठिन छ ।
दिपेन्द्र वान्तवा वरिष्ठ पत्रकार दिपेन्द्र वान्तवाले संसद प्रतिपक्षी विहिन देखिन्छ । मिडिया विधेयक, गुठि विधेयकमा विरोधहरु भए तर त्यसको नेतृत्व प्रतिपक्ष कांग्रेसले गरेको जस्तो लाग्दैन । यतिखेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नेकपा नै भएको जस्तो पनि देखिएको छ । कांग्रेस छायाँमा परेको देखिएको छ । उहाँहरुले संसदलाई बन्धक बनाइरहनु भएको छ । संसदमा नेकपा बलियो छ तर सडकमा कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्थ्यो त्यो पनि देखिएको छैन ।
कांग्रेस आफै अलमलिएको छ । कहिले गुटको कुरा हुन्छ । आफ्नै विषयमा छलफल गरेर समय कटाएका छौं । कांग्रेसले विभिन्न विषयमा विज्ञहरुको समुह बनाएर पनि फिडब्याग लिन सक्छ । यसमा काम भएको देखिदैन । कांग्रेसको धारणा आउन कुनै पनि विषयमा आउन सकिराखेको छैन । कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति देखाउने काम सबै भन्दा पहिला गर्नु आवश्यक छ ।
एकेन्द्र पन्त दैलेख नेपाली कांग्रेसका नेता एकेन्द्र पन्तलेयो विषय अत्यन्तै सान्दर्भीक छ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको गतिविधि भन्ने । अहिले प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसले भन्न मिडियाले भूमिका निभाएको छ । कार्यपालिका, व्यावस्थापिका, न्यायपालिका यो सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै छ । यो चिन्ताको विषय हो । कांग्रेसले संसद भित्र केही पनि गरेको छैन भन्ने कुरा होइन । गगन थापा लगायत नेताहरु बोलिपनि रहनु भएको छ । यतिखेरको सभामुख, उपसभामुखको चुनावमा कांग्रेसले उम्मेदवार दिन नसक्दा पनि राम्रो सन्देश गएको छैन । पार्टीले सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा गुटहरु फस्टाउछन् । यतिखेर कांग्रेसमा यही भइराखेको छ । यसलाई प्रसय दिनु हुँदैन ।
संविधानमा हामीले सुरुमा मन्त्रालय बनाउदा १६ को बहस गरियो १८ बनाइयो पछि २१ बनाइयो, फेरि २४ बनाइयो । यो पनि जति मनलाग्यो त्यति बनाउने परिस्थिति बनेको छ । संविधानमासभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने कुरा बनायो यसमा पनि खासै कुरा उठ्न सकेन । यो संसदमा सदस्यहरुले उठाउने कुरा हो । यो सरकार काण्डै काण्डमा मुछिएको छ । ३० किताले सुन काण्ड, निर्मला पन्तको हत्या होस्, एनसेल होस्, मूल्यवृद्धिले गाह्रो बनाएको छ यसलाई संसदमा उठाएर किन ठप्प पार्न नसकेको हो । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने यो मुलुक कहिले बन्छ ।
रामचन्द्र घिमिरे नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका सदस्य रामचन्द्र घिमिरेले संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गतिविधि शून्य जस्तो देखिन्छ । संसदमा कांग्रेसको उपस्थिति बाहिर देखिने किसिमले हुन सकेको छैन । संसद भित्र बैठकको दौडादौड र हस्याङ्फस्याङ भने देखिएकै छ । यतिखेर बाहिर सामाजिक संजालमा कांग्रेसको पनि कम दयनीय अवस्था छैन । कांग्रेस माथि धेरै प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेस भित्रको समस्या समाधान भयो भनेर बाहिर आएको अझ थप बढी लज्जास्पद बनाउने खालको बनेर आएको छ । आन्तरिक विवादलाई पनि फेससेभिङका रुपले हामीले ल्याउन सकेनौं भागवण्डा गरेर आएपछि पार्टी खुईलिने स्वभाविकै भयो ।
यतिखेर संजोगले सभामुखको निर्वाचनको अवसर आएको थियो । नेकपा सरकारले ल्याएको विधेयक र नेकपाको सांसदले पास गरेका ऐनहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद र जनआन्दोलनलाई आमन्त्रण गरिरहेको अवस्थामा सभामुखको उम्मेदवारी सहित अघि बढ्नु पर्ने कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिदा कांग्रेस समर्थक, शुभेच्छुकले मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । अहिले हामीले उम्मेदवार नदिदा नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष यस्तो पनि हुन्छ भन्ने नमुना प्रतिपक्षी भूमिकालाई पनि समाप्त पारेका छौं । नेकपाका सभामुखका उम्मेदवार हत्याराको आरोपक लागेका विवादास्पद व्यक्ति हुन् ।
यतिखेरको हाम्रो पार्टी नेतृत्व शिर्षस्थ बसेर पनि आफ्नो समस्या सुल्झाउन नसक्ने देखिइरहनु भएको छ । यतिखेर कांग्रेसको नेतृत्वनै छैन भने जस्तो देखियो । नागरिकले सरकारको आलोचना गर्ने बलियो प्रतिपक्षी पनि नपाउने अवस्था हामीले बनायौं । संसदमा न्यूनसंख्या भएको कांग्रेसले आफ्ना कुरा सडक र प्रबुद्धबर्गसम्म पु¥याउनु पर्ने हुन्थ्यो । अहिले नेकपासँग विधेयक निर्माणमा भएको विरोधलाई पार्टीको घोषणापत्रमा पनि लिपिबद्ध गर्दै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रको निर्णय अनुसार माघ ५ गते सिडियो मार्फत ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाएका छौं । त्यसमा पनि जिल्ला प्रशासनमा कतिपय जिल्लामा हामीलाई अपमानीत हुने किसिमको व्यवहार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको लामो इतिहास हुँदाा हुँदै पनि नयाँ दल जस्तो व्यवहार देखिन थालेको छ । भविष्य निर्माणका लागि अब कांग्रेस पार्टीले के गर्नुपर्छ ? हामीले के गर्नुपर्छ ? यो विषय पनि स्पष्ट भएर छिटो अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
संजीव थापा नेपाल विद्यार्थी संघ आरआर क्याम्पसका संजीव थापाले भने
त बोल त्यति मात्र म जो सुन्न चाहन्छु ।
त हेर त्यतिमात्र म देखाउन चाहन्छु ।
त सुन त्यतिमात्र म सुनाउन चाहन्छु ।
तेरो स्वतन्त्रताको घेरा मैले रोकेको शून्य भन्दा बाहिर छैन ।
किनकी मलाई चिनेको छस् म हुँ सरकार ।
भनेर जुन भनिएको छ अहिले सरकार प्रतिपक्षलाई त्यहि स्थानमा पु¥यउन लागिपरेको छ । कांग्रेस बलियो हुँदा हुदै पनि खुम्चिएको छ । कांग्रेसका सांसदले संसद तताउनु होस् र नेविसंघलाई सडक तताउन जिममेवारी दिनुहोस् । लोकतन्त्रका पक्षमा हामी सँगै एकजुट भएर लड्नुको विकल्प छैन ।
कार्यक्रममाटोपेन्द्र रानामगर, श्याममणी आचार्य, अनिष श्रेष्ठ, प्रेम खत्री, लगायतले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो ।
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १४:०७
२१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १३:४२